Dastuurka Somaliland (Af-Ingiriis: Constitution of Somaliland; Af-Carabi: أرض الصومال دستور) waa dastuurka dowliga ah ee Jamhuuriyada Somaliland kaasi oo . Jamhuuriyadda Somaliland ku ansixisay natiijada Aftida Dastuurka. Jamhuuriyadda Somaliland ee ku meel gaadhka ahaa. Markuu tixgeliyey: Qodobka 47aad. Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana lagu soo saari doonaa faafinta rasmiga ah ee dawladda. Allaa Mahad Leh,. Maxamed Ibraahim Cigaal.
Author: Masida Akinolmaran
Waxaa reebban urur kasta oo leh ujeeddooyin lid ku ah danaha ummadda ama qarsoodi ah ama Ieh qaab cudan ama hubaysan amaba kuwa kale ee khilaafsan xeerka weji kasta ha lahaadeene. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka dastuurma Golaha Wakijiada. Waajibinta cashuuraha iyo wixii takaaliif ah waxa loo eegayaa danta iyo maslaxadda bulshada.
Inuu yahay somsliland, maskax ahaan iyo jidh ahaanba u gudan kara xilkiisa. Guddoomiyaha gobolku waa xidhiidhiyaha Xukuumadda-dhexe iyo degmooyinka gobolka, isagoo hoos imanaya Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa.
Waxa Ku-xigeenka Guddoomiyaha noqon doonaa garsooraha dhinaca darajada ugu sarreeya garsoorayaasha ka tirsan Maxamadda Sare Seniority. Xubnaha Guddida Culimada waxa ka reebban. Ujeedada ayaa lagu sheegay in dadweynaha la baro xuquuqul insaanka, waajibaadka dalku ku leeyahay muwaadinka iyo daastuurka uu qofku leeyahay labadaba.
Shaqo-ka-tegidda Xubinta Golaha Guurtida. Mashruuc-sharci waxa Golaha Wakiilada u soo bandhigi kara 1.
Waa inuu yahay muwaadin ka tirsan Jamhuuriyadda Somaliland. Fulinta xeerarka aan Waaxda Garsoorka awoodaheeda hoos iman; Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Xeerka ayaa caddeynaya ciqaabta ka dhalan karta gudasha la’aanta waajibaadka ku xusan faqradda laad, 2aad, 3aad iyo 4aad. Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. DaIka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo; gobol kastaana waxa uu u sonaliland qaybsamaa degmooyin.
Xuquuqda, xorriyaadka iyo waajibaadka Dastuurku xaqiijiyey, haweenku ragga way ula siman yihiin, wixii Shareecadda Islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane. Heesta Qaranku waa mid muujinaysa bartilmaameedyada Dastuurka, caqiidada ummadda, hab-dhaqmeedka wadatashi; waxanay yeelanaysaa miyuusik u gaar ah oo ka duwan kuwa dalalka kale; waxaana lagu soo saarayaa xeer.
Somaliland oo qabatay wacyi-gelin ku aaddan dastuurka.
Haddii aanu Goluhu fadhiyin, waxa waajib ah in oggolaanshaha tallaabada laga qaadayo xubinta laga helo Guddida Joogtada xastuurka ee Golaha Wakiilada; Golahana waxa la soo hor-dhigayaa kal-fadhiga xiga. Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha.
Agaasimayaasha Guud ee Wasaaradaha iyo hay’adaha; d. Bixinta astaamaha xurmo iyo sharaf ee ay ka mid yihiin billadaha.
Qof kastaa waxa uu xaq u Ieeyahay in uu si gaar ah u yeesho hanti, taas oo ay shardi tahay in uu ku helo waddo xalaal ah. Mowduucyada la xiriira Soomaaliya. Hay’adda Shaqaalaha Dawladda 4. Haddii ay bannaanto xubin ka mid ah Golaha Guurtidu ka hor Iixda bilood ee ugu dambeeya muddada xilka Golaha Guurtida, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamays-tirayso muddada xiIka Golaha.
Inta lagu jiro muddada gaaban in dastuurka dhamaystiran ma la ansixiyay. Garsoorka Garsoorka ee Somaliland. Doorashada Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha, oo isku mar loo codaynayo, kuna salaysan habka u codaynta liistada, waxa Ia qaban doonaa bil ka hor dhammaadka muddada xilka Madaxweynaha hore.
Kal-fadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiulada waxa uu ku qabsoomi karaa: Bannaanaanshaha Xubinimada Guddida Culimada. Tirada Guddida iyo Muddada Xilka. Haddli gobollada iyo degmooyinku ay muddo saddex bilood ah gudahood ku dhisan waayaan golayaal, Xukuumadda-dhexe waxay ku meel gaadh ahaan u magacaabaysaa maamulo gobolo iyo degmooyin iyadoo kala tashanaysa xubnaha Golaha Wakiilada iyo Golaha Guurtida ee metala gobolladaas iyo degmooyinka iyo weliba guurtida degaamadaas.
Qof kasta oo u dhashay Somaliland, kana issirran dadkii deggenaa dalka Somaliland 26kii Juun k iyo ka hor, waxa loo aqoonsanayaa muwaadin Somaliland.
Somaliland oo qabatay wacyi-gelin ku aaddan dastuurka. – BBC News Somali
Golaha cusub waxa uu qabanayaa fadhigiisa ugu horreeya 30 soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa maalinta Iagu dhawaaqo go’aamada doorashada; waxaana isugu yeedhaya Madaxweynaha Jamhuuriydda.
Qofka loo dooranayo xubinimada Golaha Guurtida waa in uu yeesho shuruudaha qofka isu- taagaya xubinimada Golaha Wakulada marka laga reebo da’da iyo heerka aqoonta oo noqonaya sidan hoos ku xusan: Xarun magaceedyada Bog Wadahadal.
Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka.